ဟိုဆေးFríasနှင့်အတူအသံ Insight | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဟိုဆေးFríasနှင့်အတူအသံဝိပဿနာ
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာထက်ပိုမှတ်တမ်းတင်အတွက်လက်ထက်တော်ပြန်အထိချဲ့တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူ, ထုတ်လုပ်မှုအသံရောနှောဟိုဆေးFríasအသံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာကျင်းပမယ့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိပါတယ်။ သူကဂီတ၌မိမိက start တယ်ပေမယ့်သူကထိုကဲ့သို့သောက Motorola, IBM, ESPN, အဖြစ်က high-profile ကို client များအတွက်စီမံကိန်းများအပေါ်သူ၏ပြုပြင်ဦးဆောင်သည့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအသံထုတ်လုပ်မှုအခန်းကဏ္ဍ, ကျင်းပမယ့် အချိန် မဂ္ဂဇင်းနှင့်ပိုပြီး။
သူ DPA "အသံဝိပဿနာ" Q & A ၏ဤနောက်ဆုံးပေါ်အရစ်ကျ၌သူ၏ဇာတ်လမ်းကိုမျှဝေ:
ကျွန်မအကြောင်းကိုရှစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ထုတ်လုပ်မှုသံကိုရောနှောသကဲ့သို့ငါ၏စတင်ရရှိခဲ့သည်။ နှစ်အနည်းငယ်များအတွက်ဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ကျွန်မအသံကတခြားရှုထောင့်စူးစမ်းလေ့လာပြန်ကျောင်းကိုသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ငါ၏အဒီဂရီပြီးသွားနေစဉ်, ကျောင်းသားတစ်ဦးရုပ်ရှင်အပေါ်တစ်ဦးစန်းအော်ပရေတာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုငါ့ရင်ခွင်သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ ကြွင်းသောအရာသမိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့နောက်ခံနှင့်သင့်စောင့်ရှောက်မှုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါမဆိုသိသာ / အကြိုက်ဆုံးစီမံကိန်းများကိုသို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏အလုပ်အတွက်အနိုင်ရပါပြီဆိုဆုအပါအဝင်, r ။
ကျွန်မပထမဦးဆုံးနှစ်လယ်ပိုင်း 2000s အတွက် Indie အနုပညာရှင်နှင့်ဂီတသမားတစ်အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်သံကိုစတင်ခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက်အသံဂိမ်းအသံကွန်ပျူတာ programming နဲ့ Post-ထုတ်လုပ်မှုအသံကကြိုးစားနေပြီးနောက်, ငါထုတ်လုပ်မှုသံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ - အစဉ်အမြဲကတည်းကမှာ-အိမ်မှာခံစားခဲ့ရပါပြီ။
ထုတ်လုပ်မှုသံကိုရောနှောအဖြစ်ငါ့အချိန်ကာလအတွင်းကျွန်မကြော်ငြာနှင့်ပိုပြီး To-စီးရီးစာရွက်စာတမ်းမှ Indie features တွေကနေအထိစီမံကိန်းများကျယ်အမျိုးမျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ကောင်းသောကံကြမ္မာခဲ့ပါတယ်။ ငါအဖြစ်မှန်တီဗွီရှိုးများပါဝင်သည်အလွန်ဂုဏ်ယူပါတယ်တချို့ကအတိတ်အလုပ် မီးသတ်ကျွန်း; Motorola ရဲ့ Moto Reissued ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကမ်ပိန်း - ရေးခွအနုပညာရှင် Futura featuring; အချိန် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ "2016 ပုဂ္ဂိုလ်တစ်နှစ်တာ၏" အင်တာဗျူး; ဘရော့ဒ်ဝေးရဲ့အပေါ်ခြင်္သေ့မင်းကြီးသည် 360 အတွက်ဘဝအသက်တာ၏စက်ဝိုင်း နှင့် Aladdin ဘရော့ဒ်ဝေးရဲ့အပေါ် 360 ငါ့ကိုကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးကမိတ်ဆွေ virtual reality အတွေ့အကြုံများ; IBM ၏ IBM က၏အသံ စွဲငြိဖွယ်ရာ ASMR စီးရီး; Ashe အဘိဓါန် '' 68 virtual reality အတွေ့အကြုံကို; နှင့်အငြိမ်းစား NBA ကစားသမားများနှင့် NBA တခုတခုအပေါ်မှာလာမည့် ESPN မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အနည်းငယ်ဖော်ပြသံအမတ်ကြီး Felipe လိုပက်ဇ်, ဂရုစိုက်။
ဤသည်နေ့ရက်ကာလတစ်ထုတ်လုပ်မှုသံကိုရောနှောသကဲ့သို့ငါ၏ Adventures အပေါငျးတို့သအတူငါမှာထုတ်လုပ်မှု၏မိတ်ဖက်များနှင့်ဦးခေါင်းအဖြစ်ကိုလည်းအစေခံ အခနျးလေးတစ်ဦးနဲ့ full-service ကိုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီစွဲငြိဖွယ်ရာမီဒီယာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
ငါကငါ့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကြီးမားဆုံးစီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ်ရေတွက်လျှင်သိကြပေမယ့်အများဆုံးဆက်ဆက်တစ်ဦး, ဖန်တီးမှုနည်းပညာနှင့်သမိုင်းရှုထောင့်ကနေအကြှနျုပျအဘို့အလွန်အထူးနေရာအရပ်ရရှိထားသူတမ Ashe အဘိဓါန် '' 68။ ဒါကအမေရိကန်ကိုဖွင့်အနိုင်ရနှင့် New York မှာပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအမေရိကန်ပွင့်လင်းမှာပြသဖို့ရန်ပထမဦးဆုံးလူမည်းတင်းနစ်ကစားသမားအကြောင်း virtual reality အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ New Frontier လိုင်း-Up ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာယင်း၏ပွဲတော် Premiere ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤသည်အထူးသဖြင့်စီမံကိန်းကိုကြောင့်ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာစိန်ခေါ်မှုများအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောအပျြောအပါးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်တော်အပေါ်ကိုငါတို့လက်ရနိုင်အဖြစ်အများအပြားသံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, Foley အသံ, အခန်းသေံ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ambisonic သံကိုအသံသွင်း recoding နေစဉ်မသိမသာ, ထပ်တူပြုခြင်းအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအကြားတဦးတည်းခုနစ်သရုပ်ဆောင်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြရသည်။ ကျနော်တို့တတျနိုငျသသလောက်အသုံးဝင် Sonic သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ post ကိုဖြည့်စွက်ချင်တယ်။ ကအပေါင်းတို့၏အလယ်ဗဟိုမှာ DPA ရဲ့ခဲ့ကြ 4060 နှင့် 4063 အသေးစား Omnidirectional Microphone, synchronous သည့်သရုပ်ဆောင်များကို '' ဖျော်ဖြေပွဲဖမ်းယူဖို့အဓိက tools များအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသော။
သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး DPA သုံးပြီးခဲ့ပြီနည်း ဘယ်အချိန်မှာသင်ပထမဦးဆုံးအဘယ်ကြောင့် DPA ကိုစတင်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ခဲ့တာလဲ
ငါမကြာမီတွမ် Hooper ရဲ့အဘို့ထိုသူတို့ရှိမုန်ဟေးယက်စ '' အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်စေ့စေ့စပ်စပ်ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုပြီးမှ, 2013 န်းကျင် DPA MICS သုံးပြီးစတင် က Les Miserables။ ငါရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်တော်မူပြီးမှသတိရအထူးအသံကြီးဘယ်လိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပါသေးတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ရှိမုန်ကိုဘယ်လိုသူတို့ကုမ္ပဏီရဲ့စန်း MICS ကြတဲ့ပွဲစဉ်၏အနီးကပ်နှင့်မည်သို့ lavs တိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဖမ်းယူအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍများအတွက် DPA lavalier MICS ချီးကျူးလိုက်သည်။ ငါရောင်းချခဲ့သည်! သူတို့ကိုငါစမ်းခဲ့, ဒါကြောင့်ငါအနည်းငယ် 4060s နှင့် 4063s ဝယ်ငါအချိန်တွင်အလုပ်လုပ်ခံခဲ့ရသည်တစ် TLC အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲအပေါ်ချက်ချင်းသုံးစွဲဖို့ထားတော်မူ၏။ ငါသူတို့သည်ငါ၏သည်အခြား lavalier MICS ထက်တံပိုးမှုတ်သောအခါမည်မျှပိုကောင်းခြင်းဖြင့်လွခဲ့သည်။ ငါ DPA နဲ့ငါ့ lavalier MICS အများစုအစားထိုးတက်အဆုံးသတ်နှင့်မကြာမီပြီးနောက်, ငါ၏အချို့ DPA စန်းနှင့် gooseneck မိုက်ခရိုဖုန်းကဆက်ပြောသည်
အဘယ်အရာကိုဘဏ်ဍာသို့မဟုတ်ပြပွဲသင်တို့အဘို့ DPA MICS ကိုအသုံးပြုကြပြီလော သငျသညျအဘယျသို့ DPA MICS အသုံးပြုကြတာလဲ?
DPA မိုက်ခရိုဖုန်းငါထုတ်လုပ်ရန်တော်တော်များများတိုင်းစီမံကိန်းကိုမှာကြားနိုင်ပါသည်။ ငါ lavalier မိုက်ခရိုဖုန်း၏အသုံးပြုမှုကို employ အခါတိုင်းတစ်ဦး 4060 ငါ၏အရှေးခယျြမှုဖြစ်ပါတယ်။ အခါတိုင်းကျွန်မစက်ရုံသို့မဟုတ် stash မိုက်ခရိုဖုန်း, အထူးသဖြင့်တစ်ဦးကားထဲတွင်ကျနော်ဖွယ်ရှိတစ်ဦးကိုအသုံးပြုပြီးတယ် ဃ: dicate™ 4018 Supercardioid မိုက်ကရိုဖုန်း - တစ်ဦး MMP-G preamp နှင့် gooseneck ထိတ်လန့်နှင့်အတူ mount တစ်ဦး 4098 Supercardioid မိုက်ကရိုဖုန်း သို့မဟုတ်တစ် 4080 အသေးစား Cardioid မိုက်ကရိုဖုန်း။ ရွေးချယ်မှုအကြှနျုပျ၏အတို ShotGun အဆိုပါဖြစ်ပါသည် 4017 သေနတ်များမိုက်ကရိုဖုန်း.
ထိုတွင် မီးသတ်ကျွန်း စီမံကိန်းကိုကျနော်တို့ကျော်လွှားခဲ့ရတယ်တဦးတည်းစိန်ခေါ်မှုသွန်းအဖွဲ့ဝင်များကမကြာခဏသင်တစ်ဦးကမ်းခြေမှာပရဒိသုတစ်ခုရှိုးရိုက်ကူးနေတဲ့အခါမှာမလွှဲမရှောင်ခဲ့သော shirtless တက်အဆုံးသတ်မယ်လို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာကျနော်တို့, DPA ကနေ Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. ထည့်သွင်းစဉ်းစား 4561 လည်ဆွဲမိုက်ကရိုဖုန်း (ယခုရပ်စဲ), ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကြည့်ရှုလမ်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်ခဲ့ဒါထုံးစံလည်ဆွဲမိုက်တူးစင်အောင်ရွေးချယ်။ ကျနော်တို့ 4060 အသေးစား Omnidirectional Microphone အသုံးပြု. အကြိမ်ကြိမ်လည်ဆွဲ MICS တည်ဆောက်ရန် PerePaix လက်ဝတ်ရတနာထံမှစည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကား, ဤပြပွဲအပေါ်အလွန်ခက်ခဲအခြေအနေများတွင်သံကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သင်တို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်သည့်စီမံကိန်းများအတွက် Mike ၏စိန်ခေါ်မှုများအချို့ဘာတွေလဲ? ဘယ်လို DPA ကဤစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းကူညီသုံးပြီးသနည်း?
က scripted တီဗွီရှိုးတစ်ခု unscripted မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး virtual reality အတွေ့အကြုံကိုဖွင့်ခြင်းရှိမရှိ - - ငါရင်ဆိုင်ရအဓိကစိန်ခေါ်မှုငါအဖြစ်စစ်မှန်တဲ့နှင့်အမျှလင်းမြင်သာတတ်နိုင်သမျှထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းသရုပ်ဆောင်မယ့်သို့မဟုတ်ဘာသာရပ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်သေချာအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မသုံးတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းပွင့်လင်းမှုရှိရမည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးပြားချပ်ချပ်အကြိမ်ရေတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်လူ့စကားသံကိုဖွစျစနေိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသောနှင့်အတူတစ်ဦးအနိမ့် Self-ဆူညံသံများနှင့်ကျယ်ပြန့် dynamic range ကို (တစ်ခါတစ်ရံအားလုံးအတူတူပင်ယူအတွင်း) ကတိုးတိုးလေးကနေအော်ဟစ်မှအရာအားလုံးကိုလက်ခံပေးနိုင်ရန်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုရှိပါတယ်။ DPA ကဤစံနှုန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖို့အကောင်းဆုံးမိုက်ခရိုဖုန်းထုတ်လုပ်သည်။
သင့်ရဲ့အလုပ်လုပ်စတိုင်နှင့်သင့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောနည်းပညာပိုင်းအသေးစိတ်ကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ:
ငါညွှန်ကြားရေးမှူးသို့မဟုတ်ဖန်တီးသူတွေနဲ့စေ့စေ့စပ်စပ်စကားပြောဆိုမှုနှင့်အတူတိုင်းစီမံကိန်းကိုစတင်ဖို့။ ဤစကားဝိုင်းများအားဖြင့်, ငါ၏ရည်မှန်းချက်အပြည့်အဝဖန်တီးမှုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်စီမံကိန်း, အမဲသားထုတ်နားလည်သူတို့ကိုအောင်မြင်ရန်နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များဆုံးဖြတ်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုသွန်းအဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်ဘာသာရပ်များ၏နံပါတ်, တည်နေရာ, ဗီရို, ကျားကန်, VFX, ရွေ့လျားမှုဖမ်းမိ, အဖြစ် - - ငါစီမံကိန်းအသံလိုအပ်ချက်များကိုထားရှိရန်သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးရှာအံ့သောငှါငါတို့သည်အချို့သောအခြေခံကျသောအရာတို့ကိုဖြိုဖျက်ပြီးပြီပြီးတာနဲ့။ ငါသည်လည်းပို့စ်ဆက်သွယ်ရေးအထူးသဖြင့် VR သို့မဟုတ် AR လိုပဲပိုမိုရှုပ်ထွေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းများအတွက်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်စသည်တို့ကိုမှတ်တမ်းတင်, ထပ်တူပြုခြင်း, Multi-ခြေရာခံခြင်း, metadata ကို, အယ်ဒီတာအဖွဲ့အဘို့အမွှေ, ဖြန့်ဝေ, ဦးအပါအဝင်လုပ်ငန်းအသွားအလာကျန်တာတွေတည်ထောင်ရန်ပို့စ်ဌာနနှင့်အတူ chat ။ ငါကပိုအချိန်, ဒီအဆင့်အတွက်သုံးစွဲကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းများမှာပိုမိုအောင်မြင်သော, ကြှနျုပျတို့ post ကိုပေးပိုကောင်း Deliverable ကြောင်းရှာပါ။
တစ်ရက်-to-နေ့ရက်တွင်, ငါ့အာရုံမြင်ကွင်းသို့မဟုတျကြှနျုပျတို့ကိုဖြေရှင်းရန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအတွက်သံကိုဖမ်းယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုထွက်ရှာဖွေသည်။ ဒါကြောင့်ပဲတစ်ဦးစန်းမိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်အတူအောင်မြင်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်ငါသည်လည်းတစ်စုံတစ်ဦးကဝါယာကြိုးသင့်သလဲ ငါတစ်နေရာရာမှာတစ်မိုက် stash နိုင်သလား? အများစုမှာကြိမ်, ငါသည် (: ဆူညံမဖြစ်ကိုဖတ်) အကောင်းဆုံးတည်နေရာသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်အလုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာဖွေအထူးသဖြင့်အခါ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ရှာပါ။ ငါ့ကိုရန်, နည်းပညာပိုင်း, တကပွင့်လင်း signal ကိုမျိုးပွါးခြင်းနှင့် signal ကို-to-ဆူညံသံအချိုးအစားနှင့်အတူ, ရှိသမျှအကောင်းဆုံးမိုက်ခရိုဖုန်းနေရာချထားအကြောင်းပါ။ Creative, ကဖျော်ဖြေပွဲသို့မဟုတ်စစ်မှန်သောဘဝအချိန်လေးဖမ်းမိဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်အကြောင်းပါ။
သငျသညျ DPA MICS အပေါ်သုံးစွဲဖို့အနာဂတ်ကဘာလဲစီမံကိန်းများကိုစီစဉ်သလဲ? သငျသညျအကြှနျုပျကိုကသူတို့ကိုအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြနိုင်ပါသလား?
ကြှနျုပျ၏ကုမ်ပဏီလက်ရှိကျနော်တို့ဖွယ်ရှိကံမကောင်းငါအချိန်၌ဤအချက်မှာမဆိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းမနိုင်, အသံမှတ်တမ်းတင်ဘို့ DPA မိုက်ခရိုဖုန်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအနည်းငယ်အပြန်အလှန်စီမံကိန်းများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးပဲအငြိမ်းစား NBA ကစားသမားတခုတခုအပေါ်မှာလာမည့် ESPN မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အပေါ်ထုတ်လုပ်မှုပြီးဆုံးနှင့် NBA သံအမတ်ကြီး Felipe လိုပက်ဇဂရုစိုက်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုတစ်ဒိုမီနီကန်ဖွားလူဝင်မှုအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဖြစ်တစ်ဘတ်စကက်ဘောပန်ကာနှစ်ဦးစလုံးပင်, ငါ့ကိုရန်အလွန်အထူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ပုံပန်းချီရန်: အစဉ်အမြဲငါတက်ရောက်ခဲ့သည်အလွန်ပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကက်ဘောကစားပွဲဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံပြန် 2002 အတွက်မိုင်ယာမီအပူနှင့်မင်နီဆိုတာ Timberwolves (Felipe အချိန်တွင်ကစားသောအသင်း) အကြားတစ်ဦး Pre-ရာသီပြပွဲပွဲစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဿုံထိုနေ့ရက်ကိုမှတ်မိ - ဒိုမီနီကန်-ဖြည့်လူစုလူဝေး Felipe များအတွက် non-stop မှီဝဲခြင်း, နှင့် Timberwolves ဂိမ်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူ့ကိုအကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့နီးပါး 20 နှစ်ကြာပြီးနောက်ကံကြမ္မာကဲ့သို့ခံစားရ, ထိုသို့အစဉ်အမြဲငါ့နှလုံးအတွက်အလွန်အထူးနေရာအရပ်ကိုင်ထားမည်ဖြစ်သည်။
ငါ 4063 lavalier မိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်ဃမပါဘဲအပေါငျးတို့သတကယျ့အချိန်လေးကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါပြီမဟုတ်ဘူး: 4017B ShotGun မိုက်ခရိုဖုန်း dicate ။
သငျသညျလာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းမယ့် TV နဲ့ရုပ်ရှင်များအတွက်အသံစက်မှုလုပ်ငန်းဘယ်မှာမြင်သနည်း သင်အနာဂတ်၌မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟုမဆိုအဓိကခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုမြင်သနည်း
ဒါကခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြစ်တယ်, ငါလက်ျာဘက်အဖြေရှိသည်သောမသိရပါဘူး။ ဒါဟာသင်မှန်က၏အလယ်တွင်ရောက်နေသည့်အခါရှေ့ဆက်တည်ရှိသည်ဘယ်အရာကိုမြင်မှတစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲပေမယ့်ကျနော်တို့သုံးတဲ့ tools များနှင့်ကျွန်တော်သူတို့ကိုအသုံးချဘယ်လို၌အကြှနျုပျတို့၏တီထွင်ဖန်တီးမှုအတွက်နှစ်ဦးစလုံးကြီးထွားမှုအတွက်မြင်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ၏ဘာသာစကားကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး အချို့အသက်ရှု-ယူပြီးပြောင်းလဲနေသောပုံပြင်များနှင့်ရုပ်ရှင်စတိုင်များကိုထုတ်လုပ်ထိုကဲ့သို့သောအထင်ကြီးလမ်းအတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤအသံသည်ဌာနမှတစ်ဦးစိန်ခေါ်မှုတင်ပြနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အလုပ်အကိုင်များလုပ်ဖို့နိုင်ကြသည်ကိုဘယ်လို, ဒါပေမယ့်ငါသင်သည်သင်၏ဘက်မှာတစ်ခုလုံးကိုအမှုထမ်းတဲ့အခါအထူးသဖြင့်, အောင်မြင်နိုင်ပါသည်အချို့ဖန်တီးမှုဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်သည်ဟုယုံကြည်ကြဘူး။
ကျနော်တို့စန်း, lav နှင့်စက်ရုံ MICS ၏ဆန်းသစ်ဖြန့်ကျက်လိုအပ်သည့်နယ်နိမိတ်တွန်းဆက်လက်ပိုမိုအကြောင်းအရာမြင်ရပါလိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသော Multi-လမ်းကြောင်းအရေအတွက်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် - ငါအပုဒ် 12 မှရှစ်ပြောနေတာ, ဒါပေမယ့်အထက်သို့ 20 နှင့် 30 ပုဒ်၏မဟုတ်ပါဘူး။ ငါသည်လည်းထိုအစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေလိုက်လျောညီထွေကူညီရန်ပိုကြီးသံကိုဌာနဆိုင်ရာကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပါဘူး။
(သီးခြားအခါသမယတွင်) လီယိုနာဒိုရိုမီယို Velasquez ရဲ့ဖြစ်စဉ်, DPA ရဲ့လက်တင်အမေရိကအရောင်းဒါရိုက်တာနဲ့ Christopher Spahr, DPA ရဲ့အမေရိကန်ဒုရောင်းအား၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်စျေးကွက်အားဖြင့် DPA မာစတာရဲ့ကလပ်သို့စုဆောင်း, Fríasကြီးမြတ်ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုနှင့်စိတ်အားထက်သန် DPA ရဲ့ lavalier မိုက်ခရိုဖုန်းရှိပါတယ်။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ audio ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida DPA မိုက်ကရိုဖုန်း တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SJGolden - အသံက လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2019-09-19
ယခင်: KUSI အဆင့်မြှင့်မှုများ ENG ကင်မရာများကို JVC2/3လက်မချိတ်ဆက်ပြီးသည် CAM GY-HC900 မှ
နောက်တစ်ခု: ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်နှင့်ဗီဒီယို Editor ကို